Imimmaan Aayyoo Keenyaa Ajjeechaa Alagaan Lolaa’aa Jaarrota Lakkoofsise, Dhukaasa Gootni Diinatti Lakkisuun Dhaabbata. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsImimmaan Aayyoo Keenyaa Ajjeechaa Alagaan Lolaa’aa Jaarrota Lakkoofsise, Dhukaasa Gootni Diinatti Lakkisuun Dhaabbata.
Via: Qalbeessaa Dhangi’aa ti
Oromoo: kaleessa shira shiranii kaan keenyaan, akka waan Amaara taanee, kaan keenyaa akka waan Araba ykn Sumaalee taaneetti lallaba sobaan eenyummaa nu dhabsiisuu irratti hojjetan. Eenyummaa halagaan dhabne, eenyummaa tika mootota Habashaan dhabne, tika uummata Oromoo ABO dhaan deebiifachuu keenyaa wal falmisiisaa miti. Gaddaaf gadadoo keessa utuu jirruu akka waan bilisoomneetti lallaba tikoota wayyaanee OPDO irraan nutti haasa’amaa ture sana injifachuun mataansaa waan tokkodha. Nuti qabsaa’onni haqaaf dhugaa uummataa baattannee jirra. Lafa dhugaa buruksinee dubbanna. Bakka dhugaatti awwaalamjjf ajjeefamuu filanna. Kanaaf ammas taanan OPDO irraa jijjiiramni eegamu hinjiru. OPDO waggoota 25 bilisummaa qabdu nuun jechaa baate, diddaaf qabsoo uummataan ofii lubbusheef eeggitii gochuuf garbummaa jala jiraachuu keenya miidiyaarraan dubbachuuf hihixachyushee dhageenye.
Har’a ajjeefamuun dhaabateeraa? Hidhamtoonni siyyaasaa hiikamaniiruu? WBO’n si bilosoomsuuf bahee mana hiraarsaatti gidiramaa jiru mana hiraarsaa baheeraa? Qabsaa’otakee xiqqeessuun OPDO fii jibbuun irra taranii si jibbisuuf adeemuun dhaabateera? Hanga kana hintaanetti nageenyi biyyattii eegameera jettaa? Nagaan bahee, mirga dubbachuu guututti argadhee waanan fedhu dubbadhee, dhaaba karaa nagaa qabsaa’u Qeerroo Bilisummaa Oromoof waa’eesaa hanga carra arganetti bilisummaan akka jinjirre beekuu feesisa.
Hololtoota akka Lamma Magarsaaf Abiyyi Ahemad tika waranaa Tigirootaaf tikoota Tigire ta’aniii hojjetan harkaa waan eegnu yoo jiraate qawweef qawwee qofaadha. Qawwee isaanii akka barbadaa nu waadu sana qofa harkaa argannas. Kanaa alattimmoo cancala isaanii harkaa eegna. Har’a nu ajjeesan, nu hidhan kaayyoo uummataaf dubbachuu falmachuu waan nu dhorku tokko hinjiru. Garbummaa keessa ta’anii qabeenyi horaatamus hinjiru. Duuti nuti falmataa duunu du’a garbummaan nurratti hanqaaqe hincaalu. Kanaaf falmachuu murteessine itti fufuus qabna. Wayyaanee akeeka mul’ataaf dhokataa qabduuf gurra ergisuun of ajjeesuuf biyya ofii balleessudha.
Har’a “mirga borxaan dhabne borxaan deeffanna!” jechuun akkuma WBO bosonaa baroodu, qawweensaa bahaaf lixaa daddayya’u kabajaa nutti horaa adeemuusaa madaalaa adeemuu qabna. Gooticha keenyaa WBO kunuunfachuu nageenya isaaf dhaabbachuun ammaaf amma. Saatii hololtoonni OPDO sobaaf sossobbaan wirriiqaa jiran kanatti shira isaanii irratti baruu nu feesisa. Dhiigni keenyaa dhangala’ee gumaa dhabuu hinqabu. Qaama qawween nu ajjeese qawween ajjeesnee gumaa baafachuun murteessaadha. Qaama nagaaf nagaa isaa eegda. Isa si ajjeesuu dhufe kallattii ofirraa deebisuu dandeessuun itti dhaqxa
Wayyaanee karaan nagaa itti adeemnee dide. Qeerroo Bilisummaa Oromoo waggoota dheeraaf karaa nagaan gaafataa harkaa diinaan ajjeefamnee gumaa dhabuu qofaan garaa madoo ta’aa jiraachaa jirra. Qaama karaa nagaa itti adeemnu qawween nutti dhufuuf qawween filannoo dhumaati. Qawween keenya kabachiisaa mirga dhala Oromoo ta’uu erga hubannee qawwee jabeeffachuudha. Waraana tumsachuudha, gargaaruudha. Wellistoonnis akkuma duraa farfachuun dirqama, onnachiisuuf karaa wallee, geera walaloo fi gama maraan itti adeemuun amma.
Imimmaan aayyoo keenyaa ajjeechaa halagaan lolaa’aa jaarrota lakkoofsise, dhukaasa gootni diinatti lakkisuun dhaabbata! Kanaan ala bohicha watwaannan holola afaanfaajjiidhaan daabbata jedhanii eeguun abjuudha. Gartuuwwaan tikaa Wayyaanee Abiyyi Ahemad fi Lammaa Magarsaa aantummaa sabaa warra hinaabne qaamota sossobaa nu ajjeesaniif gurra laachuun dhaabbatuu qaba.